Oge Ọgụgụ: 11 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 19/09/2020)
Intercite ụgbọ oloko (IC). An Intercites ụgbọ okporo ígwè bụ ụgbọ oloko awara awara nke na-adịghị njem na elu-ọsọ edoghi na ejikọ n'obodo nakwa dị ka mkpumkpu anya. You can purchase IC tickets in advance to get a discount.
Akwa-agba ụgbọ oloko (TGV). TGV ụgbọ oloko na-kasị ụgbọ oloko na France, na tiketi maka ha dị ka zuo 90 ụbọchị tupu. The ahịa ha anọgide na-ebili dị ka ọpụpụ ụbọchị na-eru nso, ka akwụkwọ ha n'oge maka kasị ala price. A tiketi zụrụ 90 ụbọchị tupu ike eri € 30. Ma ọ bụrụ na ị zụta ha a ụbọchị ole na ole tupu ọpụpụ, the ticket price could be as high as €100.
mma. Ị adịghị mkpa ka nchegbu banyere ịzụ a tiketi oge ọ bụla ị na-achọ ime a ụgbọ okporo ígwè, ma ị ga-enwe mgbanwe ebe ọ bụ na ị ga-enweghị a ebe ọ bụla ụgbọ okporo ígwè na ị chọrọ.
AN Mkpa IHE: Okporo ígwè Pass bụ nanị ezi uru maka ego ma ọ bụrụ na ị na-azụ njem karịa 14 ụbọchị, ma ọ bụrụ na ị na-erughị, karịa mgbe mgbe gbaa ụgbọ okporo ígwè dị ka ihe Save A Train bụ àjà na-enye mma uru maka gị ego gị.
Mgbe njem nleta na France, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ha na-eme Paris dị ka ha amalite ha ụgbọ okporo ígwè njem n'ime mba. Mgbe malite na Paris, i nwere ike iru fọrọ nke nta ọ bụla na-aga n'ime obodo. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ndị isi ebe jere ozi site na Paris bụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè.
Na-abata n'oge n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Ike n'aka na-n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ọ dịkarịa ala 20 nkeji tupu ọpụpụ, ma ọ bụ ọbụna na mbụ ma ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị si nnukwu n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, dị ka Gare du Nord na Paris. N'ihi na a njem nleta na-adịghị asụ French, ọ dịghị ihe na njọ karịa bịarutere naanị nkeji ole na ole tupu ọpụpụ enweghị nwere nwetụrụ echiche nke ebe na-aga. Obatara n'oge ga-enye gị oge na-elele Mbula Board maka ebe ọmụma, mata nke n'elu ikpo okwu gị ụgbọ okporo ígwè na-ahapụ, and find the right platform.
Mbụ na klas na nke abụọ-otu tiketi. E nwere bụghị ọtụtụ ihe dị iche n'etiti mbụ na klas na nke abụọ-otu ụgbọala. Otú ọ dị, ọ bụ jụụ na mbụ na klas, na oche na-a bit ibu. Nke abụọ-otu ụgbọala na-ahụ n'ụzọ zuru okè mfe. It’s worth mentioning that first-class tickets cost about 1.5x more than the second-class fare.
Ị gaghị nkwụghachi ọnụ ala tiketi. Perhaps the only downside to cheap tickets is that they cannot be changed or refunded.
Iji Mgbawa & PIN kaadị. Ịzụta a tiketi na ihe akpaghị aka tiketi miri, ị ga-mkpa a Mgbawa & PIN kaadị, N'ihi ya, hụ na ị maara na koodu PIN gị, ọ bụ ezie na anyị adịghị ike ikwu na ọ, ebe ya dị nnọọ oké ọnụ.
All isi obodo na France na-ejikọrọ na TGV – na elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè netwọk na ụgbọ oloko na njem na gbapụrụ ọsọ nke fọrọ nke nta 200 mph. Na ndị a gbapụrụ ọsọ, all areas of France are within your reach.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “The Complete Guide To Travel Na France Site Train” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-travel-france-train%2F የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#sncf tgv TrainStation gbaa ụgbọ okporo ígwè Train Travel traintravelfrance travelfrance